२० बर्षिया युवतीले छोरा जन्मिने साथ मेरो बच्चा होइन भन्दै लान मानिनन…. – Namaste Dainik
२० बर्षिया युवतीले छोरा जन्मिने साथ मेरो बच्चा होइन भन्दै लान मानिनन….
July 27, 2020 July 27, 2020 NamastedainikLeaveaComment on २० बर्षिया युवतीले छोरा जन्मिने साथ मेरो बच्चा होइन भन्दै लान मानिनन….
युवतीको भनाई उद्धृत गर्दै अस्पतालका कर्मचारीले भने,‘उनलाई पुरुषहरु मन पर्दैन, कहिले पनि प्रेमी बनाइनन् र कहिले पनि यौ न सम्बन्ध राखिनन्, त्यसकारण आफू गर्भवती हुनै नसक्ने उनले दाबी गरिरहेकी थिइन् ।’
जब उनका डाक्टरले र क्सीको मातमा यस्तो भएको हो कि भनेर सोधे तब उनले भनिन्,‘मलाई र क्सीसँग एलर्जी छ,मैले कहिले पनि र क्सी छोएकै छैन ।’ महिलाको तौल अत्यधिक भएकाले उनको पेटमा विगत ९ महिनादेखि बच्चा हुर्किरहेको छ भन्ने थाहा नभएको हुनसक्ने डाक्टरले बताएका छन् ।
‘उनी गर्भवती छिन् र चाँडै नै प्र सव पीडामा जाँदै छिन् भन्ने बारे उनलाई सम्झाउनै सकिएन,’डाक्टरले भने । उनको स्वास्थ्यस्थिती बिग्रन थालेपछि अस्पतालले युवतीको शल्यक्रिया गर्यो । उनले छोरालाई जन्म दिइन् । नवजात शिशुलाई उनकी आमाले छुनसमेत हिच्किचाएपछि महिलाको परिवारलाई सुम्पिइयो ।